စိမ့် by koluzoe 102994 views
သူဌေးကတော်ကြီးနဲ့ကိုလူပျို by koluzoe 59511 views
ခံစားကြည့်ပါ...မမူ by koluzoe 248472 views
မမဖြူ by koluzoe 66976 views
အလှမပြည့်ခင်ကြွေတဲ့ပန်း by koluzoe 107484 views
အသက်နှင့်ရမ္မက် by koluzoe 183006 views
1. ပထမဦးဆုံး ကြုံဖူးသူသူ့နာမည်က သဇင်။ကျွန်တော် ပထမဆုံး လိုးခဲ့ဖူးတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ပေါ့။ သူက ကျွန်တော်၈ တန်း နှစ်တုန်းကသင်္ချာကျူရှင် ဆရာမလေ။ အဲဒီတုန်းက နေ့တစ်နေ့ကို ခုထိပြန်သတိရနေတုန်းပဲဗျာ။စနေနေ့တွေဆိုရင်
2. မသဇင်ကကျွန်တော်ကို မနက် ၉ နာရီကနေ ၁၁ နာရီထိ လာသင်တယ်။ အဲဒီစနေနေ့ကတော့ အဖေနဲ့ အမေကအလှူတစ်ခကိုသွားနေတော့ အိမ်မှာ ဘယ်သူမှ မရှဘူး။ ကျွန်တော်လည်း မသဇင် မလာခင် ငှားထားတဲ့ သြကားကိုိုဖွင့်ကြည့်နေမိတယ်။သြကားကြည့်နေရင်း မသဇင်ကမှန်းပြီး လက်ကလည်း ဂွင်းတိက်နေမိတယ်။ မှန်းဆိုသြကားထဲကိုမင်းသမီးက သူနဲ့ တော်တော်ကို တူတာကိုး။ အပြင်မှာကလည်း မိုးတွေရွာနေတာမှ သည်းသည်း မည်းမည်းပဲ။ အဲဒီအချိန်မှာဘဲလ် တီးသံကြားလို့သြကားကို အမြန်ပတ်ပြီး တံခါးကိုဖွင့်လိုက်တော့ မသဇင်ဖြစ်နေတယ်။ ]]မမ တစ်ကိုယ်လုံးလဲိမိုးရေတွေရွှဲလို့ပါလား။}} ]]အေးဟယ် မိုးက သည်းလွန်းတော့ထီးဆောင်းတာတောင် မလံဘူး။}} ]]ကျွန်တော် မေမေု့အ၀တ်တွေသွားယူပေးမယ်။ မမအ၀တ်တွေ ရေချိုးခန်းထဲမှာ ရေသွားညှစ်လက်။ ပြီးမှ မေမေ့အ၀တ်တွေနဲ့ လဲလိုက်။ }}ိုအဲဒီအချိန်မှာ မသဇင်ရဲ့ မျက်စိတွေက အောက်စိုက်နေတာကြောင့် သူ့မျက်စိလမ်းကြောင်းကို လိုက်ကြည့်တော့ သြကားကြည့်ထားလို့ ပုဆိုးအောက်က တောင်နေတဲ့ ကျွန်တော့်လီးကို ကြည့်နေတာ မှန်းသိလက်ရတယ်။ ကျွန်တော်ိုအကဲခတ်နေမှန်းသိတော့မှ - ]]မမရေချိုးခန်းထဲ သွားဦးမယ်။}}ဆိုပြီး ထွက်သွားတော့ ကျွန်တော်လည်းသူ့ရဲ့မိုးရေတွေရွှဲနေတဲ့ ကိုယနောက်ပိုင်းကို ကြည့်ပြီး လီးက ပိုတောင်လာပါတော့တယ်။အ၀တ်တွေ ရေချိုးခန်းထဲမှာ်ရေသွားညှစ်ပြီးလို့ ကျွန်တော့်အခန်းဝမှာ ရပ် စောင့်နေတဲ့သူ့ကို ကျွန်တော် ယူလာတဲ့မေမေ့အ၀တ်တွေပေးပြီးကျွန်တော့်အခန်းမှာ ၀င်လဲခိုင်းလိုက်တယ်။ သူလဲ ကျွန်တော့်ရဲ့ အခန်းထဲဝင်ပြီးတံခါးစေ့လိုကတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော့်အခန်းတံခါးဂျက် ပျက်နေတော့ စေ့ထားရုံပဲရတယ်။ ကျွန်တော့် အတွက်သူအ၀တ်လဲတာကို ချောင်းကြည့်ဖို့ ဂွင်ပဲပေါ့။မသဇင်က သူဝတ်ထားတဲ့ တီရှပ်လေးကို လှန်ချွတ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့မှဘရာစီယာ ဖြူဖြူလေးကိုပါချွတ်လိုကြ် ပီးတဘက်နဲ့ သူ့ရဲ့ ကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကိုရေသုတ်နေတယ်။ သူ့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးထွားကြိုင်းတဲ့နို့အြုံ ကီးတွေ တုန်ခါနေတာကို ကျွန်တော်အတိုင်းသား မြင်နေရတာပေါ့။ ပြီးတော့မထမီကို ချွတ်လိုက်ပြီး အ၀တ်တန်းပေါ် တင်လိုကတယ်။ ကျွန်တော်လည်ှး်သူ့ကြို ကည့် ပြီး လိုးချင်စိတ်ပေါက်လာလို့ ပုဆိုးလှန်ပြီးတောင်နေတဲ့ လီးကို ဂွင်းတိုက်မိပါတော့တယ်။ မသဇင်က သူ့ရဲ့အတွင်းခံ ဘောင်း ဘီ ပန်းရောင်လေးကို ချွတ်ဖို့ ခါးကုန်းလိုက်တော့ သူ့ရဲ့ ဖြူဖွေးပြည့်ကားနေတဲ့ဖင်ကြီး နှစလုံးအောက်က်ဖြောင့်စင်းတဲ့ ပေါင်တံတွေကြားက အမွှေးမည်းမည်းတွေနဲ့ ဆောက်ဖုတ် ဖောင်းဖောင်းကြီးကပြူထွက် လာတယ်။တိုကဆိုင်ချင်တော့ လေတိက်ပြီး စေ့ထားတဲ့တံခါး ပွငသွားချိန်နဲ့ခုတင်ပေါ်မှာ သူ တင်ထားတဲ့ မေမေ့အ၀တ်တွေ သူယူဖို့်ု့်လှည့်လက်ချိန်နဲ့က ကွက်တိဖြစ်သွားတော့ သူကို ကြည်ြ့ ပီး ဂွင်းတိုက်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ကို သူမြင်သွားတော့တာပေါ့။ ]]အို၊}}ို့ ]]ဟာ၊}} မသဇင်နဲ့ ကျွန်တော့် ပါးစပ်ကအာမေဋိတ်သံတွေ ပြိုင်တထွက်သွားကြပါတယ်။ သူ ကျွန်တော့်ကိုတအံ့တသြကြည့်နေပါတယ်။ ပြီးမှ ခုတင်ပေါ်မှာ ထိုင်ချပြီး ]]မင်းမင်း ဘာဖြစ်လို့ မမအ၀တ်လဲတာကို ချောင်းပြီးကြည့်နေရတာလဲ..။ပြီးတော့ လက်ကလဲ.....}} ဆိုပြီးဂွင်းတိုက်နေတဲ့ ကျွန်တော့်လက်နဲ့ ကျွန်တော့် လက်ထဲက လီးကိုကြည့်ပြီး သူ့ စကားတွေ ရပ်သွားတယ်။ကျွန်တော်လည်း မထူးတော့ဟုဆုံးဖြတ်ကာ အခန်းထဲဝင်လက်ပြီး]]မမရဲ့အလှမှာ နစ်မျောသွားလိုပါ}}ဆိုပြီး သူ့ကိုခုတင်ပေါ်တွန်းလှဲပြီး သူ့နှုတ်ခမ်းတွေကို ကျွန်တော့် နှုတ်ခမ်းနဲ့နမ်း၊ကျွန်တော့်လျှာကို သူ့ပါးစပ်ထဲထိုးပြီး အသားကုန်မွှေ့ပစ်လိုကတယ်။ သူရုန်းမှာစိုးလို့ ပက်လက်လန်နေတဲ့ သူ့ ကိယ်ပေါ်မှာကျွတ်တော်က ဖိအိပ်ထားလိုကြ် ပီး နမ်း နေရင်းုလက်ကလည်း တောင့်တင်းနေသူ့ဆောက်ဖုတ် ဖောင်းဖောင်းလေးကိလီးနဲ့ကလိနေလိက်တယ်။ သူက ပထမ တောု့ရုန်းနေပေမယ့် ၅မိနစ် လောက်နေတော့ မရုန်းတော့ဘဲ ကျွန်တော့် လျှာကိုပါ သူ့လျှာနဲ့ ပြန်ကလိပေးလာတယ်။ စေ့ထားတဲ့သူ့ပေါင်တွေကလည်း ကားလာတယ်။ သူ့ လက်တစ်ဖက်က ဖောင်းမို့မာတင်းနေတဲ့ ဆောက်ဖုတ်နှစ်ခြမ်းကို သူ့လက်နဲ့ဖြဲပေးလာပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း မာတောင်နေတဲ့ ဒစ်ကြီးကို ကိုငြ် ပီးဆောက်ဖုတ် နှစ်ခြမ်းကြား အပေါ်နားကတစ်ပိုင်းတစ်စ ပြူထွက်လာတဲ့ ဆောက်စိလေးကို ကျွန်တော့်ဒစ်ကြီးနဲ့ ပွတ်ပေးလိုကတယ်။ သူ့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးထွားကြိုင်းတဲ့ နိ့ကြီ်းုကို အသားကုန်စို့တော့ သူတစ်ကိုယလုံးကော့ပြီး ညည်းသံတွေပါ ထွကလာတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ ဒစ်တစ်ခလုံးလည်း သူ့််ုဆောက်ဖတ်ထဲက ထွကလာတဲ့ အရည်တွေနဲ့ ရွှဲနေပြီလေ။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်က သူ့ကို ခုတင်ပေါ်မှာ တည့်တည့်ဖြစ်အောင်ုလုပ်ပေးလိက်ပါတယ်။ ပြီးမှ သူ့ပေါင်တွေကြားမှာဒူးထောက်ထိုင်ပြီး ကျွန်တော့် ဘယ်လက်နဲ့သ့ဆောက်ဖတ်နှစ်ခြမ်းကိုူုဖြဲလိုက်တော့ဆောက်ဖုတထဲက အတွင်းသားလေးတွေရဲခနဲ ပေါ်လာတယ်။ သူကလည်း ပေါင်နှစ်ဖက်ကိုကားပေးထားတယ်။ ကျွန်တော့်ညာလက်က မာတောင်နေတဲ့ လီးကြီးကိုကိုငြ် ပီး သူ့ ဆောက် ဖုတ်လေးမှာ
3. ရွဲစိုနေတဲ့အရည်တွေနဲ့ နယ်လိုကြ် ပီး လီးဒစ်ကိုဆောက်ဖတ်အ၀မှာ အသာတေ့ပြီး ဖိသွင်းလိုက်တော့ သူ့ဆီက ]အ}ခနဲုအော်သံသာကြားလိုက်ရတယ်။ ]]အ .....}} ]]အင်း}} အောက်ကို ငံ့ကြည့် လိုကတော့တောင်မတ်နေတဲ့ လီးကြီးက်ုဒစ်တစ်ဝက်လောက် ထိပဲမြုပ်ပြီး ၀င်နေပါတယ်။ သူ လည်း မျက်စိမှိတ် အံကျိတ်ရင်း ဆက်ပြီးဝင်လာမယ့် ကျွန်တော့် လီးကိုမျှော်လင့်နေပုံရပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ၀င်လက်စ လီးကို ထပ်ပြီး ဖိသွင်းလိုက်တော့ ဒစ်တစ်ခလုံးဝင်သွားတယ်။ ]]အု၊ုအင်း၊အင်း၊}}ကျွန်တော်က လီးကို ဖြေးဖြေးခြင်းချော့ပြီး သွင်းလိုက်၊ ထုတ်လိုက် လုပ်ပေးတော့ တဖြေးဖြေးနဲ့တ၀က်လောက် အထိ ၀င်သွားတယ်။ ]]အား၊အင်း၊ကျွတ် ကျွတ်၊ အင်း၊}} မမှုတဘဲ လိုးတော့ နည်းနည်းကြပ်နေလို့်ချော့ချော့ မော့မော့ သွင်းနေရတာပေါ့။ အဲဒီလို ဒစ်ကိုမြုပ်ရုံလောက်အသွင်းအထုတ် လုပ်နေရာကလီးကိုတစ်ဆုံးထိဝင်အောင် ဆောင့်ထိုးလိုက်တော့- ]]အင်း ၊ကျွတ် ၊ကျွတ်၊ ဘယ်လိုများလုပလိုက်တာလ်ဲကွယ်။}} ]]ကျွန်တော် စိတ်တွေ ထိန်းမရတော့လို့ပါ၊ သိပ်နာသွား လား၊ ဟင်၊}} ]]နာတာပေါ့၊ မင်းက မပြောမဆိုနဲ့အရမ်းသွင်းထဲ့ လိုက်တာကိုး၊}} ကျွန်တော်လည်း လီးကို အဆုံးထိတအားထိုးမသွင်းတော့ဘဲတ၀က်လောက်ပဲသွင်းလိုက်ထတ်လိုက် လုပ်ပေးနေ လိုက် တယ်။ သူလည်း အတော်လေး ခံလို့ကောင်းလာပုံရတယ်။ သူု့ဆောက်ဖတ်နှစ်ခြမ်းကြား ပြူထွကနေတဲ့ ဆောက်စိလေး ကို သူလက်နဲ့ ပွတ်ပေးနေတယ်။ ]]အား၊ ကျွတ် ကျွတ်၊ု့် အင်း}} ]]အခု မနာတော့ဘူး မဟုတ်လားမသဇင်။}} ]]အင်း ... မနာတော့ဘူးကွယ်}} ]]>ပတ် ၊>ပတ် ၊ဘွတ် ၊>ပတ်၊}} ]]အား၊ ကျွတ် ကျွတ်၊ အင်း}} ကျွန်တော်က လီးကို သွင်းလိုကထုတ်လက်လုပ်နေရာက အားပါးတရပဲကုန်းဆောင့်ိုလိုက်တော့သည်။ ကျွန်တော်ကစိတ်လက်မာန်ပါနှင့် အားပါးတရဆောင့်ထိုးလိုက်တော့ လီးကြီးက ဆောက်ခေါင်း အဆုံးအထိ ၀င်သွားတော့တာပေါ့။ ]]အား၊ိုကျွတ် ကျွတ်၊ အင်း}} ]]>ပတ်၊ ဘွတ်၊}} ]]အမလေး မင်းမင်း ရယ် ကျွတ်ကျွတ်၊}} ]]အိုး မမရယ်ကောင်းလိုကတာ}} ]]အင့် အင့် အား ဆောက်ဖုတထဲမှာဘယ်လြို ဖစ် နေမှန်းကို မသိပါဘူး။}} ကျွန်တော်က စိတ်လိုက်မာန်ပါနှင့်အားပါးတရ ဆောင့်နေသလို သူကလည်းဖင်ကို<ကပေးရင်း ဆောက်ဖတ်နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုနဲ့ လီးကို ညှပ်ပြီုးဆွဲပေးနေတယ်။ကျွန်တော် ဇိမ်တွေ့သွားပြီး အပေါ်ကနေနင်းကန်ဆောင့်တော့တာပေါ့။ တစ်ချက် တစ်ချက် သူ့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးထွားကြိုင်းတဲ့ နို့အုံကြီးကို လျာနဲ့ ကုန်းပြီး လျှက်လိုက်ပါသေးတယ်။ ]]မမ အပေါ်က လုပ် ပေးနော်။}}ဆိုပြီးကျွန်တော်က ခုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက်လှန်ပေးလိုက်ရာ သူက အပေါ်မှ ကားယားခွပြီး လီးထိပပေါ်မှာ်ဆောက်ဖတ်အခေါင်းပေါက်ကိုတေ့ပြီး ထိုင်ချလိုက်တော့တဆုံးဝင်သွားတာပေါ့။ သူ့ ဆောက်ဖတ်မှာလဲ အရည်တွေုရွဲစိုနေတာကိုး။ အဲဒီတော့ချောချောမွေ့မွေ့ပဲ ၀င်သွားတာပေါ့။ သူက အရင်း ထိအောင် ထိုင်ချလိုက်၊ ပြန်နှစ်ဖက်ဆုပ်ကင်ပြီိးုသူ့ကို အောက်ကနေကော့ပြီး ပြန်လိုးပေးတာပေါ့။ သူကလည်း တရှူးရှူး တရှဲရှဲနှင့် ဆက်တက်ဆောင့်နေတာ ]]ဖွပ်ကနဲ၊ိုဖွပ်ကနဲ}} နေတာပဲ။ ]]အား၊ ကျွတ် ကျွတ်၊ အင်း}} ]]>ပတ်၊ ဘွတ်၊}} ]]အမလေး မင်းမင်း ရယ်}} ]]အို။ ကျွတ် ကျွတ်၊ကောင်းတယ် မသဇင်ရယ်။}} ခဏနေတော့ သူ မာန်တက်လာပြီးသူ့ဖင်ကြီးကို မြှောက်ပြီး တဇတ်ဇတ်နဲ့လီးကို အသားကုန်ဆောင့်တော့တာပါပဲ။ ကျွန်တော့် အရသာအကောင်းဆုံး တွေ့နေသလို သူ့အဖိ့မှာလဲ ပြောမပြနိုင် လောက်အောင်ုဖြစ်နေတာပေါ့။ သူက တရှူးရှူး တရှဲရှဲနှင့် ဆက်တက် ဆောင့်နေတုန်း ကျွန်တော့်လီးထဲက လရည်တွေိုပန်းထွက်လာပြီးပြီးသွားတော့တာပဲဗျာ။ ]]ကောင်းလိုကတာ မမရယ်၊ဘယ်လို ပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ပါဘူး၊ဟင်း။်မမရော ကျေနပ်ရဲ့လား ဟင်။}} ]]အင်း မမလဲ ဘယ်လို ပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ပါဘူး၊ မင်းမင်းလီးကြီးကမမဆောက်ဖတ်ထဲမှာ ပြည့်ကျပ်နေပြီး ဆောက်ဖတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုဖြစ်နေမှန်းကိုမသိပါဘူး။ }} နှစ်ယောက်သား ဘေးချင်ုးုယှဉ်လှဲနေရင်း တွတ်ထိုးနေကြတယ်။ စကားပြောရင်း ကျွန်တော့် လက်တွေက သူ့ နိ့နှစ်လုံးကို တစ်လှည့်စီုပွတ်ချေပေးနေသလို သူလက်ကလည်း ကျွန်တော့် လီးကြီးကိုဆုပကိုင်ပြီး ကလိနေတော့ လီးကြီးက ပြန့််တောင်မတ်လာတာပေါ့။ ]]မမ ကလိနေတာနဲ့ ကျွန်တော့်လီးက ပြန်တောင် လာပြီမမရဲ့။ ထပ်လုပ်ဦးမယ်နော် }} ]]ဟင်၊မင်းမင်းကလဲ၊ မ၀သေးလိ့လား။}} ]]မမ ဆောက်ဖုတက လိုးရတာအရမ်းကောင်းတော့၊ ဘယ်လုပ်လ့ ၀မှာလဲ။တစ်ချီုိုလောက်လိုးပါရစေဦး၊ နော်။}} ]]လူကြီးတွေ ပြန်လာရင် သိသွားပါဦးမယ် မင်းမင်း ရယ်။}} ]]မင်္ဂလာဆောင်က၁၁နာရီမှပြီးမှာဆိုတော့ သူတို့ က ၁၁နာရီခွဲလောက်မှရောက်မှာပါ မမရယ်။}} ကျွန်တော်က ပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့ပက်လက်လှန်အိပ်နေတဲ့ သူ့ဘေးကနေသူ့ဘက်စောင်းအိပ်၊ သူ့ခြေထောက် တစ်ဖက်ကိုမြှောက်ပြီး
4. အရည်တွေပေပွနေတဲ့ သူ့ဆောက်ပတ်အ၀မှာ လီးကိုအသာတေ့ပြီး စောက်ဖုတ်နတ်ခမ်းသား တွေကို ဒစ်ဖျားနှဲု့ခပ်ကြမ်းကြမ်း ပွတ် ပေးလိုကတယ်။ အဲဒီလို ပွတ်ပေးနေရင်း သူ့ဆောက်စိလေးကိုပါ လက်ညှိုးနဲ့ လက်မ ကြားမှာ ညှပ်ပြီ်းချေပေးလိက်တော့ မသဇင်တစ်ယောက် ထွန့်ထွန့် လူးလာပါတယ်။ ]]မင်းမင်းရယ်၊ ဘယ်လို လုပ်နေတာလဲကွယ်၊ မမုအရမ်းယားနေပြီ၊ လိုးမှာဖြင့်လဲ လီးသွင်းပြီး လိုးပေးပါတော့ကွယ်၊ဟင်း၊ ဟင်း။}}သူ လိုးခိုင်နေပေမယ့် ကျွန်တော်ကမလိုးသေးဘဲ သူ့ ညာဘက်ပေါင်ကိုကျွန်တော့် ဘယ်ဘက်လက်နဲ့ ဖိဆွဲလိုကြ် ပီးပြဲထွက်လာတဲ့ ဆောက်ဖုတ်ကြီး ကြားကဆောက်စိလေးကို လီးထိပ်နဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းပဲ ဖိပွတ်ပေးနေလိက်ပါတယ်၊ ]ုအင်း}၊]အင်း} နဲ့ သူ့ ညည်းသံတွေထွက်လာတော့ ဆောက်စိလေးကို ဒစ်နဲ့ဆက်တက် ထပ်ပြီး ပွတ်ပစ် လိုက်ပါတယ်။ို]]အံမယ်လေး မင်းမင်းရယ်၊ လိုးပါ၊လိုးပါဆိုတော့လဲ မလိုးပဲ ပွတ်နေတယ်။ မမအရမ်းခံချင်နေပြီ၊ လိုးပါတော့၊ သွင်း၊ သွင်း၊အား။}} သူဖီးဝင်ပြီး ကျွန်တော်ကို အတင်းလိုးခိုင်းနေတုန်းမှာ ကျွန်တော့်ရဲ့လီးကို သူ့ရဲ့ဆောက်ဖုတထဲ့်ဆောင့်ထိုးလိက်ပါတယ်။ ]]ရှူး ရှူး ရှူး ကျွတ် ကျွတ် ကျွတ်၊ကောင်းလိုက်တာ အိုအို}} ကျွန်တော်ကလည်ုးပက်လက်အိပ်နေတဲ့ သူ့ဘေးကနေ သူ့ဘက်စောင်းအိပ်ရင်း ကျွန်တော့်လီးကို အဆုံးအထိ သွင်းလိုကထုတ်လက်ိုလုပ်ပေးလိက်တော့သူလည်း ဖီးဝင်ပြီး တစ်ဖက်ကလှည့် ခါးကိုကော့ပြီး သူ့ဖင်ကို ကျွန်တော့်ဘက် တိုး ပေးတော့တာပေါ့။ို]]အို။ အင့် ရှူး ရှူး ရှူး ကျွတ်ကျွတ်၊ အင်းဟင်း။ မင်းမင်း ရယ်။ }} ]]အား၊ ကျွတ် ကျွတ်၊ အင်း}} ]]>ပတ်၊ ဘွတ်၊}}ကျွန်တော့်ရဲ့ အလိုး အဆောင့်မှာသူ မိန်းမောသွားပြီး အားပါးတရပဲ ကော့ပေးနေပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်ကလည်းအသားကုန်ကို ဆောင့်တာပေါ့။ ]]အား၊ ကျွတ် ကျွတ်၊ အင်း}} ]]မမ အခုကော နာနေသေးလား}} ]]ဟင့်အင်း ...မနာတော့ဘူး}} ]]>ပတ် ၊>ပတ် ၊ဘွတ် ၊>ပတ် ၊}} ]]အား၊ ကျွတ် ကျွတ်၊ အင်း}} ]]ရှူး ကျွတ် ကျွတ်၊ }} ကျွန်တော်ကပိုပြီး ကြမ်းလာလေလေ သူက ပြို ပီး ကော့ကော့ ပေးလေလေနှင့်နှစ်ဦးသား သဲသဲမဲမဲပင် လိုးနေခံနေကြတာကုတင်တစ်ခုလုံး ကျွကနဲ၊ ကျွီကနဲ မြည်နေတော့ တာပေါ့။ ကျွန်တော် လိုးနေရင်းနဲ့အားမရတော့လို့ သူကို လေးဖက်ထောက်ီ့ပြီး ကုန်းခိုင်းလိုကတယ်။ကျွန်တော်က ကုန်းနေတဲ့ သူ့အနောက်မှာ ဒူးထောက်ထိုင်ပြီး မာတောင်နေတဲ့ လီးကြီးကိကိုင်ပြီ်းုလီးဒစ်ကိုဆောက်ဖတ်အ၀မှာ အသာတေ့ပြီး အဆုံးအထိဝင်အောင် ဖိသွင်းလိုက်တယ်။ ]]အား၊ ကျွတ် ကျွတ်၊ အင်း}}ုကျွန်တော်လည်း လီးကို အဆုံးအထိ သွင်းလိုက်ထတ်လိုက် လုပ်ပေးနေလိုကတယ်။ သူကလည်း လေးဖက် ထောက်ုခံရတာ ကြိုက်သွားပုံရတယ်။ ခဏနေတော့ခါးကော့ပြီး သူ့ဖင်ကြီးကို ကျွန်တော့်ဘက်တိုးတိုးပေးလာတယ်။ ပါးစပ်ကလည်းအသံအစံထွက်လာတယ်။ ]]မင်းမင်းရယ်၊ အင်း}} ]]>ပတ်၊ ဘွတ်၊}} ]]အား၊ကျွတ် ကျွတ်၊}} သူ အရှိန်တက်လာုမှန်းသိလကျွန်တော်ကလည်း လီးအသွင်းအထုတ်လုပ်နေတဲ့ အရှိန်ကိုတင်လိုက်တယ်။ ]]အား၊ အင့် အင့် }} ]]ကျွတ် ကျွတ်၊ို့အင်း}} ]]>ပတ်၊ ဘွတ်၊}}]]အမလေး မင်းမင်း ရယ်}} ]]အိုး မမရယ် ကောင်းလိုက်တာ}} ]]အင့် အင့် အား ဆောက်ဖုတထဲမှာကျိန်းနေတာပ်ဲမင်းမင်းရယ်။ အား}} ]]>ပတ်၊ ဘွတ်၊>ပတ်၊ ဘွတ်၊>ပတ်၊ ဘွတ်၊>ပတ်၊ ဘွတ်၊}} ]]အို ဘယ်လများ လုပ်နေတာလဲ။အင်ိးုကျွတ် ကျွတ်၊ ]] ကျွန်တော်လည်း မာန်တက်လာပြီးကော့ပေးထား တဲ့ သူ့ရဲ့ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ဖင်ကြီးနှစ်လုံးကိုအသားကုန်ဆုပကိုင်ပြီး အပီ အပြင်လိုးပေးနေလိုကတယ်။ အချက် ၃၀လောက်မနားတမ်းဆောင့်ပြီးချိန်မှာတော့ကျွန်တော့်လီးထဲကလရည်တွေဟာ ထွက် ကျချင်လာပါတော့တယ်။ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော့်လီးကို သူ့ဆောက်ဖုတ်ထဲအဆုံးအထိဝင်အောင်ဖိသွင်းရင်း လီးထဲက လရည်တွေကို ပန်းထုတ်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်။ ]]အား ကောင်းလိုက်တာ။ ရှီး..}} ]]အမလေး ပူခနဲပဲ။}} နှစ်ချီဆက်တိုက် မနားတမ်းခံလိုက်ရလို့မသဇင်မောပြီး ခုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက်လှန် လှဲချလိက်တုန်း ကျွန်တော်က သူ့ခေါင်းနားမှာ ဆောင်ကြောင့်ထိုင်ပြီးကျွန်တော့်ုလီးကို သူ့ပါးစပ်နား တေ့ပေး လိုက်တယ်။ ]]ဟင် မင်းမင်း၊ ဒါက ဘာလုပ်တာတုန်း။}} ]]အမှုတ်ခံချင်လို့ပါဗျာ။}} ]]ဘယ်လို။}} ]]မမလျှာလေးနဲ့ လျှက်ပေးလေ။}} ]]ဒီလီးကြီးကို၊ နှစ်ချီဆက်တက်အားပါးတရ လိုးပြီးတာတောင်ိုမကျေနပ်နိုင်သေးဘူးလား မင်းမင်းရယ်။ ခံရတဲ့လကမျော့နေပြီ။}} ]]လုပ်ပါဗျာ၊ တစ်ခါမှ အမှုတ်မခံဖူးလို့ပါ။}} ]]လူကြီးတွေူသိသွားမှာ ကြောက်တယ်ကွယ်။}} ]]လူကြီးတွေက ၁၁နာရီခွဲလောက်မှရောက်မှာပါဆို၊ အခုမှ ၁၁နာရီကျော်ကျော်ပဲရှိပါသေးတယ် မမရယ်။ ခဏလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ်မှုတ်ပေးပါဗျာ။ အမှုတ်ခံချင်လွန်းလို့ပါ}} ကျွန်တော်ကပြောနေရင်းနဲ့ ကျွန်တော့်လီးကို သူ့နတ်ခမ်းပေါ်မှာတင်ပေးလိုကတယ်။ မသဇင်က သူ့ ပါးစပ်ကိုဟပေးတော့ ကျွန်ှု
5. တော်ကလည်း ဒစ်ကထည်လိုက်ပြီး- ]]မမ ငုံထားပြီး မမ ခေါင်းကို ရှေတိုးနောက်ဆုတ် လုပ်ပေးနော်။}} ဆိုတော့ သူကိုဒစ်ကို ငုံထားရင်း အသွင်းအထုတ် လုပ်ပေးရှာပါတယ်။ ]]အား၊ အူး ကောင်းလိုက်တာမမရယ်၊ ကျွတ် ကျွတ်။}}ပက်လက်လှန် လှဲချနေရင်းကျွန်တော့် ဒစ် တစ်ခုလုံးကို သူ့ပါးစပ်နဲ့ငုံ၊နှုတ်ခမ်းနဲ့ဖိပြီး အခါ ၂၀ လောက်ဆက်တိုက် သူ့ ပါးစပ်ထဲ စုပ်သွင်းလိုက် ဆွဲထုတ်လက်ပြီး ]]မင်းမင်းရယ်၊ လူကြီးတွေ ပြန်ရောက်လာတော့မယ်၊ိုတော်တော့နော်။}} ]]ကျွန်တော့်လီးကို မမလျှာလေးနဲ့ ခဏလျှက်ပေးပါဦးဗျာ။ မမမှုတတာ အရမ်းကောင်းလို့ပါ။်လျှာလေးနဲ့လျှ က်ပေးပြီးရင်တော့ တော်ပါပြီ။}}ဆိုတော့ သူက လီးကိုအရင်းက ကိုငြ် ပီးဒစ်ကြီးကို လျှာနဲ့ ၂ မိနစ်လောက်ထပ်ကလိပေးရှာပါတယ်။ သူ့ပါးမှာလည်း ကျွန်တော့်လီးက လရည်တွေ ပေလို့။ ပြီးမှ ]]တော်ပြီနော် မင်း မင်း။ မမအ၀တ်ဝတ်တော့ မယ်။ မင်းမင်းလဲ အ၀တ် ၀တ်တော့။ လူကြီးတွေ ရောက်လာတော့မယ်။ မ၀သေးရင်လဲနောက်နေ့တွေမှနေတော့။}} ]]တစ်ကယ်နော်မမ။ နောက်နေ့တွေလဲလိုးမယ်နော်။}} ]]အေးပါ မင်းမင်းရယ်။မမတစ်သက်မှာ တစ်ခါမှ လီးနဲ့အလိုးမခံဖူးသေးဘူး။ မင်းလိုးပေးမှပဲ မမလည်း လီးနဲ့ အလိုးခံရတဲ့အရသာကို ကောင်းကောင်းသိရတော့တာပါပဲကွယ်။ ဆောက်ပတ်ကအစပိုင်းသာနာတာ။ နောက်ပိုင်းကျတော့ အရမ်းကောင်းတာပဲ။ မမလဲမင်းမင်းနဲ့လိုးရတာ ကြိုက်သွားပါပြီ။ နောက်နေ့တွေကျရင်လဲ လိုးကြတာပေါ့။ လူကြီးတွေရှိနေရင်တော့ အထာလေးနဲ့ပဲနေလိက်ပေါ့}} ]]အင်းပါ မသဇင်ရဲ့ နောက်နေ့တွေကျရင်တော့ မမ ကို ကျွန်တော်မလိုးခင် မမဆောက်ပတ်ကိုအရင်လျှ က်ပေးဦးမယ်။ ဒါမှ မမဆောက်ပတ်က အရည်တွေထွက်လာပြီးလိုးတဲ့ အခါ မမ ခံနင်မှာ။}}ို ပြီးပါပြီ ။